WEYER NYIKA - Shanghai Weyer Electric Co., Ltd.
1999 kambani yakavambwa
2003 yakasimbiswa ISO9001 Quality Management System
2005 Yakagadzwa marabhoritari emazuva ano uye epamusoro
2008 Zvigadzirwa zvedu zvakapfuura UL, CE
2009 Yegore yekutengesa huwandu hwakapfuura mamirioni zana CNY kekutanga
2013 SAP Sisitimu yakaunzwa, kambani yakapinda nhambo nyowani yehurongwa manejimendi
2014 Vakapihwa Yakakwira-tech bhizinesi uye Yakakurumbira-brand zvigadzirwa
2015 Yakawanikwa IATF16949 System certification; akakunda zita rekuti "Shanghai Yakakurumbira Brand" uye "Diki Tekinoroji Giant"
2016 Yakapedzwa share share uye zvirongwa zvekunyorwa zvakatangwa. Weyer Precision Technology (Shanghai) Co, Ltd. yakavambwa.
2017 Vakapihwa Shanghai Civilization Unit; Zvigadzirwa zvedu zvakapfuura ATEX & IECEX
2018 DNV.GL Classification Society Certification; Weyer Precision yakaiswa mukushanda
2019 Makore makumi maviri ekuyeukwa kweWEYER
Yakagadzwa muna 1999, Shanghai Weyer Electric Co., Ltd.i inyanzvi yepamusorosoro inogadzira kugadzirwa kwetambo gland, tubing uye tubing fittings, tambo tambo uye plug-in zvinongedzo. Tiri tambo yekudzivirira sisitimu yekugadzirisa mhinduro, inodzivirira tambo muminda senge nyowani magetsi mota, njanji, michina yemuchadenga, marobhoti, magetsi ekugadzira michina, michina yemagetsi, michina yekuvaka, kuiswa kwemagetsi, mwenje, maelevheti, nezvimwe. Makore makumi maviri zvakaitika kune tambo yekuchengetedza system, WEYER yakunda mukurumbira kubva kune vatengi uye vashandisi vekupedzisira kumba nekune dzimwe nyika.
Hunhu chinhu chakakosha muchikamu cheWEYER chehunyanzvi. Tine anoshanda emhando yepamusoro manejimendi timu kuyedza nguva nenguva uye zvisirizvo zvigadzirwa mune yedu yepasi rose rabhoritari. Isu tinovimbisa mhando yezvigadzirwa zvedu pasi pechinyakare mashandisirwo uye nekupa nekukurumidza mushure-sevhisi yezvigadzirwa zvekuchengetedza Yedu yemhando manejimendi inosimbiswa zvinoenderana ne ISO9001 & IATF16949.
Tekinoroji inotungamira hunyanzvi. Isu tinoramba tichigadzira nekudyara-ekucheka-kumucheto, kugadzirwa kutsva, muchina uye tekinoroji. Isu tine rakasimba R & D timu yekugadzira mitsva-dhizaini mhinduro kubatsira vanogumisa vashandisi kuchengetedza tambo kuchengetedzeka uye kuwedzera mabhenefiti mune zvehupfumi. Isu zvakare tine nyanzvi muforoma timu kukwidziridza yedu fomu chimiro tichishandisa yazvino muforoma tekinoroji yekuvandudza mhando yezvigadzirwa uye kudzikisa mutengo wayo.
Weyer ane yepamusoro sevhisi sevhisi: edza nepatinogona napo kupa vatengi nemisiyano, yekumaka uye nekukurumidza masevhisi. Weyer anogara achipa mhinduro yakanakisa yeprojekti kuti igadzire yakakwana system yekudzivirira. Weyer anogara achiendesa nenguva yekusangana nezvinodiwa nevatengi. Weyer anogara achipa zvinobudirira mushure-sevhisi yekumisikidza uye kugadzirisa.
1. Jekiseni Machine
2. Zvinhu Zvokupa Kudya Center
3. Mushini Wokugadzira Simbi
4. Mould Machine
5. Nzvimbo Yekuchengetedza
6. Nzvimbo yekuchengetera 2